﻿ हेर्नुहोस् युट्युबाट सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने व्यक्तिहरु, कसले कति कमाए ?
हेर्नुहोस् युट्युबाट सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने व्यक्तिहरु, कसले कति कमाए ?
तर केही यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसले आफ्नो सिर्जनात्मक भिडियोहरु यूट्युबमा पोस्ट गरेर नाम र दाम दुवै कमाएका छन् । यूट्युबबाट एक वर्षमा करोडौं कमाउने व्यक्तिहरु पनि छन् ।
१. प्यु डाइ पाइ
एन्थोनी पाडिल्ला र इयान हेकोक्स युट्युबका अग्रणी यूट्युबरहरु हुन् । उनीहरुले सन् २००५ देखी नै कमेडी च्यानल स्मोस सुरु गरेका थिए । उनीहरुले अहिले सातवटा च्यानलहरु चलाँउछन् । उनीहरुले यो वर्ष यूट्युबबाटै करिब ७५ करोड रुपैंया कमाएका छन् ।
अमेरिकी बेकर तथा अभिनेत्री रोसाना पानसिनाले यो वर्ष यूट्युबबाट करिब ६५ करोड रुपैंया कमाएकी छन् । उनको नर्डी नम्मीज नामको च्यानल छ जहाँ उनले बेकीङ सो चलाँउछिन् ।
९. ऋत र लिङ्क
ऋत र लिङ्कको जोडीले पनि यो वर्ष ५० करोड रुपैंया भन्दा बढी कमाएको छ । ‘गुड मिथिकल मर्निङ’ नामको टक–शोबाट उनीहरुले उक्त रकम कमाएका हुन् ।